नयाँ दिल्लीमा नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तकालय 29 नोभेम्बर 2021 -को दिन एभरेष्ट नेपाली लाइब्रेरीको नाममा शुरू गरिएको छ। कार्यक्रममा भारतको लागि नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने उहाँकै बाहुलीबाट पुस्तकालयको शुरूवात गरिएको थियो। एभरेष्ट च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष युवराज बरालको अध्यक्षता तथा पुस्तकालयको संयोजक योगगुरु डा. मोहन कार्कीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा पश्चिम बङ्गाल, महाराष्ट्र, असम, मध्यप्रदेश, मणिपुर, उत्तराखण्डदेखि उत्तरप्रदेश, हरियाणा एवं दिल्लीका विशिष्ट व्यक्ति विशेषको उपस्थित थियो। यस पुस्तकालय खोल्नुको मुख्य उद्देश्य देशव्यापी रूपमा रहेका नेपाली भाषीहरूको विभिन्न तहका पुस्तकहरूलाई एउटै छानोमुनी राख्दै देशभरका गोर्खा नेपालीभाषीहरूको वौद्धिक पहिचान राजधानीसम्म पुऱ्याउनु हो संयोजक कार्कीले बताए। यस पुस्तकालयको शुरूले देशमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको निम्ति यस पुस्तकालय आयामको रूपमा रहने प्रमुख अतिथि सुवेदीले बताए।
यस पुस्तकालयमा लगभग एक लाख पचास हजार पुस्तकहरू राख्न सकिने क्षमता रहेको छ भने एकैसाथमा चार दर्जन पाठकहरू बस्नसक्ने प्रबन्ध गरिएको छ। यस पुस्तकालय निर्माणमा पतञ्जली योगपिठ तथा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टको संस्थापक तथा आयुर्वेद शिरोमणी आचार्य बालकृष्णज्यूको विशेष सहयोग रहेको छ। पुस्तकालयको उद्‌घाटन कार्यक्रममा साउथ एसियन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डा. युवराज पोख्रेल, अल इण्डिया रेडियो नेपाली विभागका प्रमुख विष्णु बहादुर गुरूङ, लेखक एवं रेडियो वार्ताकार धर्मराज थापा लगायत विभिन्न व्यक्ति विशेषले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्‌। यस पुस्तकालयमा विभिन्न विधाका पुस्तकहरू पढ़न पाइन्छ।
नोट : यस पुस्तकालयमा आफ्नो कृति पठाएर सुरक्षित राख्न चाहनुहुने लेखक साहित्यकारहरूलाई यस न. मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै पुस्तक पठाउँन परे - र्एींशीशीीं छशरिश्रळ ङळलीरीू ऊ.71,3ीव ऋश्रेेी तळीुरज्ञरीार उेश्रेपू च.इ. ठेरव, छशु ऊशश्रहळ-110044 यस ठेगानामा पठाउँन सक्नुहुनेछ।
01दार्जीलिङ पहाड़, तराई, डुवर्स- भूमिको माग
16 07:33:55 Jan 2022